Namaly omaly Rafanomezantsoa Jean Nirina talen’ny fampielezan-kevitry ny kandida Zafivao Jean Louis. Nambarany fa fitakiana ny fifidianana madio sy mangarahara no antony iraisan’ireo kandida 22 ireo satria samy manana ny tetikasa fampandrosoany ny tsirairay avy. Tsy hisy mandrakizay ny fanolorana kandida tokana, indrindra amin’izao ankatoky ny fifidianana fihodinana voalohany izao sady tsy misy matahotra fifidianana koa ny tsirairay. Etsy an-daniny, be loatra ireo karazana tebiteby mahazo ny kandida ka mahatonga ny sasany tsy hanao propagandy hatreto. Fifaninanana mantsy no hatao fa tsy fifandrafiana ka tsy tokony hiverina intsony ny zava-nisy tamin’ny taona 2001 izay nisiana Malagasy maro namoy ny ainy. Betsaka ny zavatra mila ahitsy mialoha ny tena hirosoana amin’ny fifidianana. Anisany ny fisian’ireo olona feno 18 taona marobe very zo. Misy ihany koa ireo tsy nahasolo kara-panondro nefa tokony hifidy. Ao koa ireo tsy tafiditra anaty lisi-pifidianana. Ny voamieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana anefa no tompon-teny farany amin’izany ary eo am-piandrasana ny valin-tenin’izy ireo, ireo kandida 22 isa ankehitriny.